Shariif iyo Gaas Oo feer iskula baxsadey gudaha London - iftineducation.com
iftineducation.com – London ayaa waxaa kulan ku yeeshay Madaxweynihii hore ee dalka Somalia Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo R/wasaarihii la shaqeynayay haatanna ah madaxweynaha maamulka Puntland C/wali Maxamed Cali (Gaas).
Masuuliyiintan oo la sheego inay saaxiibo gaar ah yihiin ayaa waxaa ay ka wada hadleen arrimo badan oo khuseeya danaha Soomaaliya, waxaana Sheekh Shariif oo isna socdaal maalmo ah ku jooga London ay isla soo qaadeen sababta Puntland ay u quudarreyneyso inay meel uga dhacdo sharafta Soomaaliyeed.
Abdiweli Mohamed Ali, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed
Waxaase la sheegay in C/wali Gaas uu ku dooday in Somalia ay wax badan dhibaato ku soo jirtay cidda kali ah ee ka saari kartana ay tahay Puntland, isagoo xusay lagama maarmaan ay tahay in talada Somalia ka timaaddo Garowe oo ah xarunta Puntland.
Shariif oo aad u yaqaan qabyaaladda ka buuxda C/wali Gaas, ayaa ku hanjabay in hadii uu doorashada 2016-ka ku guuleysto uu tallaabo adag oo sharci ah ka qaadi doono maamulka C/wali Gaas oo sad bursi ballaaran uu ka muuqdo.
Muranka Labada Masuul, ayaa sababi gaaray dagaal gacan ka hadal ah oo ilik ama waji murux ka dhaco, balse Siyaasiyiin kale ayaa ku dhex-booday oo kala dirtay Labadooda.